INkantolo yoMthethosisekelo: UMogoeng ukhiphe ujuqu ngokushaywa kwezingane emakhaya – Bayede News
INkantolo yoMthethosisekelo: UMogoeng ukhiphe ujuqu ngokushaywa kwezingane emakhaya
INKANTOLO YoMthethosisekelo njengayo enamandla amakhulu ezweni
Posted on 20/09/2019 25/09/2019 by Bayede-News
UMehluleli oMkhulu uMogoeng ekhipha isinqumo esingujuqu Isithombe: Daily Maverick
INKANTOLO YoMthethosisekelo njengayo enamandla amakhulu ezweni kuthe ngoLwesithathu zili-18 kuMandulo wezi-2019 yakhipha isinqumo esimayelana nesicelo esasifakiwe sokwedlulisela phambili icala ngokushaywa kwezingane emakhaya. Isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo sihambisene nesasithathwe phambilini yiNkantolo Enkulu esathi akuhambisani noMthethosisekelo ukuthi kushaywe izingane. Lokhu kusho ukuthi akukho emthethweni ukuthi abazali basebenzise umthetho wokuvikela ngokujezisa okwamukelekile nokufanelekile (common law defence of moderate and reasonable chastisement) ukujezisa izingane zabo njengokuzishaya ngenduku nokunye.
UMehluleli uMogoeng Mogoeng uthe sekuyoba kwababhekele umthetho ukuba balandele amacala okuhlukunyezwa kwezingane abikiwe. Mhla zingama-21 kuNcwaba wezi- 2017 iNkantolo Enkulu iGauteng Local Division eGoli yalalela isicelo sokwedluliselwa kwecala yiNkantolo Yesifunda eGoli lapho kwakulahlwe khona ngecala uYG ngokushaya ingane
yakhe yomfana eneminyaka yobudala eli-13. Ngesikhathi icala liqulwa eNkantolo Enkulu uYG waveza ukuthi into ayenza yayingaphambene nakancane nomthetho kodwa wayefaka ingane yakhe endleni futhi ekwenza lokho ngokulandela umthetho ojwayelekile osebenzayo ezweni. INkantolo Enkulu yafuna izeluleko ngokuzithethelela kukaYG, yahlanganyela noNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo noWezokututhukiswa Komphakathi,
kwangenelela neFreedom of Religion South Africa (FOR SA), iChildren’s Institute, iSonke Gender Justice neQuaker Peace Centre. Bonke bazibophezela ngokuba ngasohlangothini lweNkantolo Enkulu.INkantolo Enkulu yasichitha isicelo sokwedlulisela icala yanquma ukuthi umthetho wokuvikela ngokujezisa okwamukelekile nokufanelekile awukho emthethweni ngezizathu zokuthi uhlukumeza uphinde uphule amalungelo ezingane. Yanquma ukuthi amalungelo ezingane awabhekelelwa ngenxa yeminyaka yazo, akukho ukuvikelela okulinganayo
ngokomthetho, izingane zehliswa isithunzi, zizithola zingabagilwa balo lonke uhlobo lodlame kanti ngaphezu kwalokho zigcina seziphazamisekile nasemqondweni. Isicelo sokuphonsela inselelo iNkantolo Enkulu eNkantolo YoMthethosisekelo sifakwe inhlangano iFOR SA ebingasohlangothini lweNkantolo Enkulu. IFOR SA ithi ikwenza lokhu egameni lamalungu ayo nomphakathi ngobubanzi “okholelwa ukuthi imibhalo, namanye amavesi eNcwadini Engcwele, iyakuvumela uma kuwukuthi ayiphoqi ukuba abazali bafake endleleni izingane zabo. Okumele baphendule uNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo, uNgqongqoshe
Wezokuthuthukiswa Komphakathi, uMqondisi kaZwelonke Wezokushushisa, iYG, iChildren’s Institute, iQuaker Peace Centre neSisonke Gender Justice. Udaba obeluphambi kweNkantolo YoMthethosisekelo bekuyilolo oluthi ngabe ukunquma kweNkantolo Enkulu ekutheni awuhambisani nomthethosisekelo umthetho wokuvikela ngokujezisa okwamukelekile nokufanelekile kuyiqiniso yini. IFOR SA yathi inalo ilungelo lokuphonsela inselelo lesi sinqumo seNkantolo Enkulu ngenxa yokuthi akekho okhombisa ukuthi ufuna ukusiphonsela inselelo phakathi kukaYG noMbuso.
Le nhlangano ithi yabona ukuthi kunesidingo sokuthi umphakathi wazi ukuthi iNkantolo YoMthethosisekelo yisiphi isinqumo engasithatha kulolu daba. IFOR SA imi kwelokuthi iNkantolo Enkulu kwakungamele kube yiyona enquma ukuthi udaba oluthinta uMthethosisekelo ngoba kulezi zinhlangano ayikho eyaluphakamisayo futhi zazingekho nezizathu ezaziphoqa ukuthi kuze kubhekwe ngakumthethosisekelo. Okunye ekugcizelelayo ukuthi kunesidingo sokuba kubhekwe ukuthi izinto okunamathuba amakhulu okuthi zingashintsha umthethomvama zishiyelwe ePhalamende njengohlaka olubalulekile kuMthethosisekelo wezwe.
Ngokulandela ukuthi umthetho wokuvikela ngokujezisa okwamukelekile nokufanelekile uhambisana kanjani noMthethosisekelo. Owayefake icala waveza ukuthi ummangalelwa akukho lapho ehlukumeza khona ilungelo lengane noma kukhona lapho eyehlisa khona isithunzi. Esikhundeni salokho waveza ukuthi konke ayekwenza kwakuwukukhombisa uthando enganeni. IFOR SA ithi iNkantolo Enkulu ngokubheka kwayo izinto kwakumele ibheke amalungelo akumthethosisekelo abazali namalungelo ezingane okunakekelwa ngabazali bazo. UNgqongqoshe ukwamukele ukuthi inhlangano iFOR SA inephuzu elizwakalayo lomthetho lokudlulisela leli cala kodwa wasichitha isicelo emi kwelokuthi isinqumo seNkantolo Enkulu yiso esayihlaba esikhonkosini.
Waveza iphuzu lokuthi isinqumo seNkantolo Enkulu sasingavimbeli abazali ukuba bakhalime izingane zabo njengokukholelwa kwabo kodwa sasiba ngesokubavimela ukuba bangazishayi izingane zabo. UNgqongqoshe wathi uma abazali befuna ukufaka endleleni izingane zabo kumele basebenzise izindlela ezisemthethweni futhi ezihambisana noMthethosisekelo, hhayi ukuzishaya. Ngokusho kwakhe lokhu kwenza kungabi khona ozobona ukuthi ilungelo lakhe lihlukumezekile phakathi komzali nengane. IChildren’s Institure, iSonke Gender JusticeneQuaker Peace Centre nabo babephikisana nesicelo ngezizathu ezifanayo nezikaNgqongqoshe. Lezi zinhlangano zabuye zanika nobufakazi obuwumphumela wokushaywa kwezingane.